Website-Index........ [Resource] - Page 2
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » Website-Index........ [Resource]
1 Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:09 pm
အမြိုးအစားခေါငျးစဉျငယျတှေ ခှဲဝပေေးထားပွီး website design နဲ့ပါတျသတျပွီး အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျလမျးညှနျခကျြတှေ ပွသထားပါတယျ၊
အကောငျးဆုံးနရောဖွဈတဲ့ photo effect ကဏ်ဍမှာဆိုရငျ photo retouching, photo bluring တှကေို တဈဆငျ့ခငျြး ရှငျးလငျးသငျကွားပေးထားပါတယျ။
Website တဈခုကို အကောငျးဆုံးဖှဲ့စညျးတညျဆောကျလိုသူတှေ အားကိုးအားထားပွုနိုငျတဲ့ နရောတဈခုပါ။
ဖကျရှငျနဲ့အလှအပကို ဦးစားပေးရငျး ရှငျးလငျးသပျရပျတဲ့ဒီဇိုငျးလေးတှကေို တညျဆောကျပွုပွငျနညျးတှေ သငျကွားပေးတဲ့ စာမကျြနှာတဈခုဖွဈပါတယျ။
အခမဲ့ရနိုငျတဲ့ theme တှနေဲ့ logo တှကေိုလညျး ပေးထားပါတယျ၊ portfolio ကဏ်ဍမှာ နီးစပျရာ design စာမကျြနှာတှရေဲ့ အကောငျးဆုံးအခကျြအလကျတှကေိုစုစညျးပေးထားပါတယျ။
လိုဂို၊ business card၊ လူသုံးကုနျပစ်စညျးဒီဇိုငျး၊ မဂ်ဂဇငျးစာမကျြနှာ ဖှဲ့စညျးပုံ၊ Layout နရောခပြုံ၊ website & blog ဒီဇိုငျး၊ ဘောငျခြာနဲ့ ပနျးဖလကျ ၊ ပို့စကတျစတဲ့ ရှိရှိသမြှ ထုတျကုနျတို့ရဲ့ ဒီဇိုငျးဂရပျဖဈနညျးပညာကို လလေ့ာလို့ရတဲ့ နရောတဈခုဖွဈပါတယျ။ Photoshop tutorial ကဏ်ဍမှာ ရှားပါးပွီး အဖိုးတနျတဲ့ သငျခနျးစာတှကေို step bu step ၊ ပုံရိပျတှနေဲ့တကှ ရှငျးလငျးပွသထားပါတယျ။
blog တဈခုအတှကျ brand ကို ဘယျလိုတညျဆောကျရမလဲ၊ Blog အတှကျ layout ဂန်တဝငျလိုဂိုတိုရဲ့ ထူးခွားတဲ့ စှဲဆောငျမှု၊ typographic နဲ့ အနုပညာ၊ အကောငျးဆုံးfont မြား၊ ဂရျဖဈကနေ ဆကျနှယျသှားတဲ့
2D, 3D တှရေဲ့ အကွောငျးအပွငျ အကောငျးဆုံး portfolio တှရေဲ့ ဓာတျပုံတှေ၊ကာလာအရောငျနဲ့ ပတျသတျပွီး ဆောငျရနျ၊ရှောငျရနျအခကျြအလကျတှကေိုပါ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
Graphic design နဲ့ ပတျသတျသမြှ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့နရောမြိုးစုံကို ခြိတျဆကျပေးထားပွီး pixel တှရေဲ့အကွောငျးကို အသအေခြာရှငျးပွပေးထားပါတယျ။ Fantastic design ဆောငျးပါးတှနေဲ့ ထိတျထိတျကွဲ ဒီဇိုငျးပညာရှငျတှရေဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြတှေ၊ ဒီဇိုငျးပွုလုပျရာမှာသုံးစှဲတဲ့ form နဲ့ font တှအေပွငျ archive 2008 december အနနေဲ့ နိုငျငံတကာမှာ လဈလပျနတေဲ့ graphic design အလုပျနရောတှကေို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
ဂရပျဖဈဒီဇိုငျးမဂ်ဂဇငျးစာမကျြနှာ တဈခုဖွဈပွီး အခုခြိနျမှာ issue4အထိ ရောကျနပွေီဖွဈပါတယျ၊ အကောငျးဆုံး ဂရပျဖဈဒီဇိုငျးသမားဖွဈအောငျ ဘယျလို လလေ့ာသငျယူပွီး ဘယျလိုနရောမြိုးတှမှော ရငျးမွဈတှေ ရနိုငျသလဲဆိုတာကိုဖျောပွထားပါတယျ၊ဥပမာအားဖွငျ့ ဒီဇိုငျးသမားတှရေဲ့အလိုအပျဆုံး web application 100 က ဘာတှလေဲ၊ Design ရဲ့ ပညတျတျောဆယျခကျြ စသညျ့ဖွငျ့စုံလငျပါတယျ။
Designer တှရေယူပွီး လလေ့ာသငျ့တဲ့ ebook 35 အုပျ၊ holiday ဒီဇိုငျးလကျဆောငျ၊ အကောငျးဆုံးဒီဇိုငျးအကွံဉာဏျမြား Ads ဒီဇိုငျးကွငွောတှေ၊ Typography နဲ့ idea အကွောငျးစသဖွငျ့ စုံလငျပျေါကွှယျပါတယျ
Last edited by ET on 23rd August 2011, 5:53 pm; edited2times in total (Reason for editing : adding tag)
51 Re: Website-Index........ [Resource] on 26th January 2010, 4:47 pm
ဒါတွေက ကျနော် Fw mail ကနေ ရလာတာလေးတွေပါ..... တူတူပဲ သူလည်း စာအုပ်တွေရှာဖို့ပဲ :cheer
52 Re: Website-Index........ [Resource] on 26th January 2010, 4:48 pm
ဒါကတော့ ဆေးပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကို ရှာဖွေမယ်ဆို အဆင်ပြေမယ့်ဆိုက်လေးပါ...
53 email ဖြင့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးကြီးမားမားပို့ချင်ရင်…. on 15th March 2010, 2:50 am
ကိုယ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီ၊ ဘယ်သူ့ဆီကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အီးမေးလ်ထဲကနေ ကြီးမားတဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်တွေ (သို့) ဗီဒီယို ဖိုင်တွေ ကို ပို့ချင်ပြီဆိုရင် အလွန် စဉ်းစာရ ကြပ်ပါတယ် ။
အခုအောက်မှာပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေ သုံးပြီး ပို့လို့ရနေပါပြီ။ လက်ရှိမှာ လူတော်တော်များများ သုံး ကြ တဲ့
DivShare or YouSendIt လို နောက်ထပ် ဆိုဒ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ သုံးကြည့်လိုက်နော်……
54 Re: Website-Index........ [Resource] on 5th April 2010, 4:03 am
ကျနေ်ာလည်း နည်းနည်းပျင်းလို့ အဲ အများကြီးပျင်းလို့ တစ်ခါတည်း ပေါင်းပြီး Code နဲ့ ထည့်ပြီးရေးလိုက်တယ်ဗျာ
စာပေ၊ နည်းပညာ၊ သတင်းနှင့် အသိပညာဆိုင်ရာ Web Site လိပ်စာများ
1. [You must be registered and logged in to see this link.] (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် TOEFL
2. [You must be registered and logged in to see this link.] (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င်
3. [You must be registered and logged in to see this link.] (ဘာသာရပ်အတော်စုံပါသည်။ လူလတ်ပိုင်းများလေ့လာသင့်သည်)
4. [You must be registered and logged in to see this link.] ( အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့်
ဆော့ဖ်ဝဲလ်စမ်းသပ်ရန်အတွက် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည်)
5. [You must be registered and logged in to see this link.] (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်)
6. [You must be registered and logged in to see this link.] (စီးပွားရေးစကားအသုံးများကို လေ့လာနိုင်သော
7. [You must be registered and logged in to see this link.] (နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းစုံဖော်ပြထားသည်)
9. [You must be registered and logged in to see this link.] ( အလွန်ကောင်းပါသည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်
ပစ္စည်းများအတွက်ပြင်ဆင်နည်း၊ အသုံးပြုနည်းများ အတော်စုံလင်ပါသည်)
10. [You must be registered and logged in to see this link.] (အွန်လိုင်းပေါ်မှ
[You must be registered and logged in to see this link.] (Linux စနစ်ကိုလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများ
2. [You must be registered and logged in to see this link.] (ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာတွေ့ရသည်)
3. [You must be registered and logged in to see this link.] (မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင်
4. [You must be registered and logged in to see this link.] (Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင်သည်)
5. [You must be registered and logged in to see this link.] (Database သီးသန့်စုစည်းထားသည်။ အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်သည်)
6. [You must be registered and logged in to see this link.] (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Photoshop နည်းပညာကို
8. [You must be registered and logged in to see this link.] (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်)
9. [You must be registered and logged in to see this link.] (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်သည်)
10. [You must be registered and logged in to see this link.] (ဂရပ်ဖစ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များစွာကို လေ့လာနိုင်သည်)
အခမဲ့ရနိုင်သော E-mail များ
1. [You must be registered and logged in to see this link.] (Domain များစွာကို
စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်)
2. [You must be registered and logged in to see this link.] (Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး
လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်)
3. [You must be registered and logged in to see this link.] (သုံးအားကောင်းပြီး လိုင်းဝင်ထွက်လွယ်ကူမြန်ဆန်ကာ 5GB
ပေးထားသော free mail ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
4. [You must be registered and logged in to see this link.] (Microsoft မှ လွှင့်တင်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
5. [You must be registered and logged in to see this link.] (အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများစွာကိုရရှိသုံးစွဲနိုင်သည်)
6. [You must be registered and logged in to see this link.] (အလှဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများဖြင့် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်)
7. [You must be registered and logged in to see this link.] (၎င်းတွင်လည်း ပြင်ဆင်ပုံအလှတစ်မျိုးနှင့် မြင်တွေ့ရရှိနိုင်သည်)
8. http://mail.yahoo.com (အတန်အသင့် နာမည်ရှိသော yahoo mail ဖြစ်သည်)
9. [You must be registered and logged in to see this link.] (နာမည်တော့ရှိပါတယ် မြန်မာပရိသတ်နည်းပါတယ်)
10. [You must be registered and logged in to see this link.] (အခမဲ့ 30GB ရရှိနိုင်သော မေးလ် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပရိသတ်တွေဟာ တစ်ခုခုရှာမယ်ဆိုင်ရင် google ကိုပဲ
ဒါပေမယ် အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသစ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကို အချို့က
မသိကြပါဘူး။ တစ်ချို့ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေဆိုရင် google
2. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
3. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
4. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
5. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
6. http://music.all-channel.com ((မြန်မာ mp3 များကို
7. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
8. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
9. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
10. http://myanmarmp3album.com (မြန်မာ mp3 များကို
11. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
12. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
13. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
14. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
15. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
17. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
18. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
19. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
20. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
21. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
22. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
24. [You must be registered and logged in to see this link.] (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
55 http://php.about.com on 28th June 2010, 12:46 pm
PHP နှင့် MySQL အကြောင်းကို လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့
Site လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတော့ PHP နှင့်
MySQL ကို Step By Step လေ့လာနိုင်စေဖို့နှင့် ၎င်းတို့ ၏ Trobleshooting
များ၊ Programing Security, Social Networking, Tools များအကြောင်းကို
လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ PHP နှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြေခံအသုံးပြုမှုများ၊ MySQL Server
နှင့် PHP ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုများ၊ File များ Upload ပြုလုပ်ခြင်းများကို
လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Web Design ကို စိတ်ဝင်စားသူများအနေနှင့် လေ့လာ
သင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Joomla နှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လေ့လာနိုင်စေရန်
ဖော်ပြပေး ထားပါတယ်။ အခြား links များ အနေနှင့် free.computer eBooks
များ၊ အခြား Learning Website များ၊ PHP code နှင့်ပတ်သက်သော Site
56 Best Web Sites. on 17th July 2010, 8:04 pm
Best Web Sites.
57 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:05 pm
58 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:05 pm
59 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:06 pm
60 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:07 pm
61 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:09 pm
62 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:10 pm
63 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:10 pm
64 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:11 pm
65 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:12 pm
66 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:14 pm
67 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:17 pm
68 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:18 pm
69 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:19 pm
70 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:21 pm
71 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:22 pm
72 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:23 pm
73 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:23 pm
74 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:24 pm
75 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:25 pm
76 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:26 pm
77 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:27 pm
78 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:27 pm
79 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th July 2010, 8:32 pm
80 Re: Website-Index........ [Resource] on 20th July 2010, 8:01 am
81 Re: Website-Index........ [Resource] on 20th July 2010, 8:03 am
82 Re: Website-Index........ [Resource] on 20th July 2010, 8:05 am
83 Re: Website-Index........ [Resource] on 8th August 2010, 2:52 pm
84 Re: Website-Index........ [Resource] on 15th September 2010, 6:51 pm
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်... မရောက်တာကြာလို့ ဆိုက်တွေ မွှေနှောက်သွားပါတယ် ကျေးဇူးပါရှင်....
85 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th October 2010, 2:38 am
86 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th October 2010, 2:41 am
87 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th October 2010, 2:47 am
88 Re: Website-Index........ [Resource] on 5th October 2010, 10:10 am
89 Re: Website-Index........ [Resource] on 8th October 2010, 11:29 pm
90 Re: Website-Index........ [Resource] on 8th October 2010, 11:30 pm
91 Re: Website-Index........ [Resource] on 29th November 2010, 6:12 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 29
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-10-04
အေးအေးဆေးဆေး ၀င်ကြည့်ဖို့ပဲ လိုတယ်။
92 Re: Website-Index........ [Resource] on 23rd August 2011, 5:52 pm
Linux စနဈကို လလေ့ာနိုငျရနျဖွဈသညျ။ စာမေးပှဲမြားအကွောငျးလညျးပါရှိသညျ။
မိမိမှာ ကှနျပြူတာနှငျ့ပတျသတျ၍ ပွဿနာမြားရှိလာခဲ့လြှငျ ဤလိပျစာတှငျ မေးမွနျးနိုငျသညျ။အလှယျတကူလလေ့ာသငျယူနိုငျသညျ။လကေ့ငျြ့ခနျးမြားပါ
Open source စနဈကိုလလေ့ာသူမြားမဖွဈမနဝေငျလလေ့ာသငျ့သညျ။ အာရှဒသေရှိပညာရှငျမြားစှာ၏လကျရာမြားပါဝငျသညျ။
Java ဘာသာရပျအတှကျ အကောငျးဆုံးလလေ့ာသငျသောနရောတဈခုပငျဖွဈသညျ။
အငျဂငျြနီယာဆိုငျရာ သိလိုသညျမြားမေးမွနျးနိုငျသညျ။အသုံးခြ အငျဂငျြနီယာ ဆော့ဝဲမြားစှာကို လလေ့ာသငျယူနိုငျသညျ။
93 Re: Website-Index........ [Resource] on 25th September 2011, 11:43 pm
Min Thit Aung
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-09-19
ကျွန်တော် ဒီsiteက စာတွေကို ကောင်းကောင်းဖတ်လို့မရလို့ပါ ဘာလိုနေလို့လဲမသိပါဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ။ှ
ဖတ်ချင်တဲ့စာတွေကိုကူးပြီး တစ်ခြားနေရာမှာ paste လုပ်ယင်တော့ ဖတ်လို့ရပါတယ်
94 Re: Website-Index........ [Resource] on 26th September 2011, 6:20 am
Min Thit Aung wrote: ကျွန်တော် ဒီsiteက စာတွေကို ကောင်းကောင်းဖတ်လို့မရလို့ပါ ဘာလိုနေလို့လဲမသိပါဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ။ှ
We are using unicode font bro.
also don't allow zaw-gyi font.
95 Re: Website-Index........ [Resource]